BAJAAJLE BAYLOOT NOQDAY: Wiil Soomaali ah oo dunida ka yaabiyey (Daawo) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka BAJAAJLE BAYLOOT NOQDAY: Wiil Soomaali ah oo dunida ka yaabiyey (Daawo)
BAJAAJLE BAYLOOT NOQDAY: Wiil Soomaali ah oo dunida ka yaabiyey (Daawo)
(Hadalsame) 09 Feb 2021 – Wiil Soomaal ah oo Bajaajle ku xamaalan jirey ayaa haatan noqday duuliye caalami ah oo xirfad wanaagsan u leh kaxaynta dayuuradaha.
Wiilkaasi waa Cumar Ducaale oo ah wiil dhallin yaro ah, oo ku barbaaray magaalada Dirir-dhabe, oo haatan ka tirsan Itoobiya, kaasoo muddo 5 sanadood ah Bajaajle ahaa ayaa haatan ka mid noqday duuliyeyaasha Ethiopian Airlines.
Ducaale ayaa ka qalin jebiyey Jaamacadda Dirir-dhabe Kulliyaddeeda Injineeriyadda, wuxuuna haatan duuliyaa diyaaradda Yurub sameega ah ee rakaabta xambaarta ee Airbus A350.
Halkan hoose ka daawo wararysi qiiro badan oo uu bixiyey Ducaale oo soo maray wacdaro nololeed oo aan wareer yarayn.
Previous articleXAALAD: Maraykanka oo markii ugu horreeysey dayuuradaha sameeya duqaymaha istaraatijiga ah soo dhoobay Norway si ay Ruushka u ”caabbiyaan”
Next articleXOG: Madaxtooyada oo aqbashay talada beesha caalamka & shin-tiriska cusub ee loo dhigay doorashada 2021 (9 qodob)